Fampirantiana an’i Madagasikara : Nifarana omaly tany Quai Branly -
AccueilVaovao SamihafaFampirantiana an’i Madagasikara : Nifarana omaly tany Quai Branly
03/01/2019 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Nanomboka ny 18 septambra 2018, ary nifarana ny 01 janoary lasa teo ny fampirantiana momba ny kolontsain’i Madagasikara tao amin’ny tranombakoka Quai Branly tany Frantsa. Vakoka sy kolontsaina malagasy 360 no hita tamin’ny fampirantiana, ka misy amin’izy ireo no vakoka efa tao amin’ity tranombakoka ity, misy kosa ireo fananan’olon-tsotra, ary teo ihany koa ny sangan’asan’ireo mpanakanto ankehitriny, toa an’i Tendramondra…
Hita tao anatin’ny fampirantiana ireo karazana zavatra samihafa mampiavaka an’i Madagasika, miainga any amin’ireo aloalo fandravahana fasana, ka hatramin’ireo sary sikotra, sary pika, sary hosodoko… Na dia tany amin’ny 12 000km aza no nanaovana ny fampirantiana, noho ny fivoaran’ny teknolojia dia nisy ny ampahany tamin’ny Malagasy, indrindra ireo tanora mpianatra, no afaka nanaraka nivantana ny fampirantiana, na dia tamin’ny alalan’ny sary ihany aza.
Ankoatra ny fampirantiana, tafiditra tao anaty fandaharam-potoana nandritra ny 3 volana naharetan’ny fampirantiana ihany koa ireo hetsika samihafa manodidina ny vakoka sy ny kolontsaina malagasy. Tao anatin’izany ny fandefasana horonantsary malagasy toa ny ny vakoka, Mahaleo… , ireo atrikasa momba ny ody, ny angano malagasy, ny fampahafantarana ny Nosy Mena, ary indrindra ny fihaonambe momba ny vakoka, ny famoronana ary ny fiarahamonina eto Madagasikara.
Hiverina amin’ireo tompony araka izany ny ampahany amin’ireo vakoka sy kolontsaina naranty tany Frantsa nandritra ilay hetsika « Madagascar, Arts de la Grande Île ». Fanontaniana mipetraka, miantefa amin’ny fanjakana malagasy, indrindra ny minisiteran’ny Kolontsaina, ny fiarovana ny vakoka ary ny fampiroboroboana ny asa tanana, ny momba ireo vakoka malagasy ireo izay toa zary lasa fananan’ny tranom-bakoka vahiny ? Vakoka izay sady harena no manamarika ny tantaran’i Madagasikara ara-kolontsaina.